शिल्पकारहरुको कल्पना कुनै सीमा छैन, र धेरै विविध र अप्रत्याशित सामग्रीबाट रोचक गहने र शिल्पहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ। यो सधैं कचरा फेंकाउन लायक छैन। उदाहरणका लागि, तपाईं के सोच्नुहुन्छ कि लामो समय सम्म खाएको मिठाईबाट कैंडी रैपर्सबाट बनाइन्छ, र तिनीहरूबाट मात्र मीठा सम्झनाहरू थिए? यो बाहिर जान्छ त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्! तिनीहरूका केही विचार गरौं।
कन्फेक्शनरी उत्पादहरूबाट स्क्रैपहरूबाट उत्पादनहरू सधैं उपयोगी छन्: आन्तरिक सजावट, सहजताको वातावरण तपाईंको घरमा ल्याउँदछ। यसबाहेक, भित्री, बक्से र टोकरीहरूको लागि, त्यहाँ सधैँ एक व्यावहारिक अनुप्रयोग हो: स्टोर कस्मेटिक्स, कार्यालय, औषधि, सुईको लागि एक तकिया, भोजन तालिकामा त्यस्तै मिठाई। यस्ता हस्तशिल्पहरू निर्माण गर्न यो सजिलो छ, यो पनि बच्चाहरुका लागि सम्भव छ, र यसैले तिनीहरूको सिर्जना पारिवारिक रचनात्मकताको लागि उपयुक्त छ।
बुनाई को आधार निम्न सिद्धान्त हो। आवरण पट्टी बनाउन धेरै चोटि राख्नु पर्छ। त्यसपछि यो आधा मा झुकाउन आवश्यक छ, र बीचमा एकै थप घुसाउन (यो एक विपरित रंग हुनुपर्छ)। अब तपाईं केडीई भट्टरबाट के गर्न सकिन्छ र ठिक र उपयोगी चीज कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ कंक्रीट उदाहरणहरू संग परिचित हुन सक्नुहुन्छ।
धेरै जैविक रूपमा यो कैंडी रैप बाट बुटवलको जस्तो देखिन्छ। क्यान्सर स्क्रैपहरू के छनौटमा निर्भर गर्दछ, यसले कुनै निश्चित रङ दायरामा वार्गीकृत वा स्थिरतालाई बाहिर पुर्याउँछ, र यहाँ सम्म कि एक सुन्दर विचारशील पैटर्न पनि। पछिल्ला अवस्थामा, तपाईंलाई एक ब्रान्डको कैंडी बाट ठूलो मात्रामा बिक्रि भण्डारण गर्न आवश्यक छ। ती सबैलाई एकै चौडाईको स्ट्रिपहरू प्राप्त गर्न सँगै जोडिएको हुनुपर्छ।
केडीई बाट क्यामेराहरू क्यान्सरबाट बनाइएका भिन्नताहरू धेरै हुन्। शिल्पको लागि, तपाईंलाई धादिङ, थ्रेडहरू र गत्ताको एक पानाको साथ सुई आवश्यक पर्दछ। पछि सबै कैंडी रैपर्सहरू धुलो हुन्छन् र एक निश्चित तरिकामा राख्छन्, तपाईं बुवा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यस अवस्थामा, आवरणको प्रत्येक बाङ्गो पट्टीको बीचमा, तपाईंले एकै घुसाउनु पर्छ। सुरुमा, एक पट्टी बाहिर आउनेछ। यसले भविष्यको टोकरीको आवाज बनाउनेछ। यस्ता खाली ठाउँहरू आवश्यक मात्रा हुनुपर्छ (उदाहरणका लागि, पाँच टुक्राहरू)। पेन एकै तरिकाले सिर्जना गरिएको छ।
सानो बास्केट प्राप्त गर्न, तपाईंले चालीस कैंडी स्क्रैपहरू भण्डारण गर्न आवश्यक छ। स्ट्रिपहरू सँगसँगै जगेडा गर्न, तिनीहरू सुई र थ्रेडको साथ सिन्धु हुनुपर्छ, यो बलियो बलियो र सबै ढाँचामार्फत पारित हुनुपर्छ। स्टिटेड स्ट्रिप्स सर्कलमा सामेल हुनुपर्दछ र थ्रेडको साथ सुईको साथ पुनः तय गरिएको हुनुपर्छ। तल्लो गत्ताबाट बनाइयो। र यसको व्यास थोडा सानो टोकरी को प्यारामिटर भन्दा बढी हुनुपर्छ। त्यसपछि यो wrappers संग टाँसिएको छ र यसलाई पहिले सिर्जना गरिएको कार्यपुस्तिकामा सीधा छ। ह्याण्डललाई कम्तीमा5वटा कैंडी लपेट्न आवश्यक पर्दछ। तीमध्ये एक पट्टी बुनाई र टोकरीमा संलग्न छ। ह्यान्डलको अन्त्य दृढ रूपमा सिने छन्। यदि सबै कुरा सही भएमा, तपाईं एक धेरै स्वच्छ टोकरी पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी, हैंडबैगहरू सिर्जना गरिएका छन्, कस्मेटिक थलहरू। ह्यान्डल तयार गर्न सकिन्छ, सुत्नका लागि सामानको स्टोरमा किन्नु।
कैंडी व्रपर्स बाट भिन्नता
एक वास्तविक चमत्कार मिठाईबाट कैंडी रैपर्सको खण्ड हुनेछ। यो तपाईंको कोठाको अनिवार्य विशेषता हुनेछ। यस खुल्ला कार्य विकर सफलतापूर्वक पानी डाल्न र फूलहरु को गुच्छा राख्न सकिन्छ। बुनाई अचम्म लाग्दो अर्डरमा जान्छ। एउटा भाँडा बनाउँदै टोकरी सिर्जना गर्दैछ। तपाईं नत्र धागे र सुई संग एक साथ स्ट्रिपहरू जोड्न सक्नुहुन्छ। स्ट्यालर उपयोगी छ। यस अवस्थामा, यो राम्रो पछाडिको उत्पादनबाट जगेडा गर्न राम्रो छ। निर्माताको कौशलबाट, यो फूलको आकारमा निर्भर गर्दछ। यो एक जस्तो देख्न सक्छ जुन तपाईंको टेबलमा छ, क्रिस्टलको बनाइएको छ। उत्कृष्ट कृति सिर्जना गर्न तपाईंलाई विभिन्न लम्बाइको धेरै स्ट्रिपहरू (खण्डको गहिरो बनाउनको लागि) चाहिन्छ।
तिनीहरू श्रृंखलामा जडित हुनुपर्छ। उत्पादनमा बल प्रदान गर्न, बीचमा टाइन वा कांच को एक कन्टेनर सम्मिलित गर्न सकिन्छ।
सबै भन्दा सफल र सरल विकल्प कैंडीबाट कैंडी रैपिडको ल्यान्ड हो, यसले भान्साको प्रवेशलाई सजावट गर्नेछ, यसलाई नयाँ वर्षको लागि कोठामा राख्न सकिन्छ। यस्तो आभूषण माथि वर्णित विधि प्रयोग गरेर वा ग्याण्डलबाट सिर्जना गरिएको विभिन्न तथ्याङ्कहरू, उदाहरणको लागि, एक तितलीमा एकत्रित गर्न सकिन्छ। तिनीहरू स्ट्रिङ वा लाइनमा थ्रेड गर्छन्।
कैंडी बाट नाजुक र सुन्दर फूलहरू प्राप्त गर्न मिठाईका भित्ताबाट खाना चलचित्रको आवश्यकता पर्दछ। यो सामग्री शक्तिशाली छ। कैंडी रैपर्सको मात्रा निर्भर छ कि फूल कसरी भरिन्छ। फ्लोरिसेन्स प्राप्त गर्न तपाईले भण्डारगरिएका wrappers सँग निम्न हेरफेरहरू प्रदर्शन गर्न आवश्यक हुनेछ। तिनीहरू सीधा हुनु पर्छ, मुस्कुराउँदछ। पाँच वा छवटा टुक्राहरूको स्ट्याकमा फोल्ड गर्नुहोस्, र तिनीहरू एक-अर्कासँग विस्थापित गरिनुपर्दछ। तिनीहरूलाई जोड्न तपाईंलाई मोती र माछा मार्ने रेखाको आवश्यकता पर्दछ, जुन wrappers को केन्द्रमा जान सकिन्छ। परिणामकारी पितृहरू किरणमा एकत्रित हुन्छन्। बाहिरबाट, एक गाँठो बाँध्नुहोस्। त्यस्ता फूलहरू धेरै टुक्राहरू हुन सक्छन्। तिनीहरू आधारमा बाँध्नु पर्छ। स्ट्याक बनाउन, जापानी भोजनको लागि उपयुक्त, शशि केब्याब वा ढोकाहरूको लागि एक स्किपर उपयुक्त छ। फूल धेरै ठूलो र उज्ज्वल हुनेछ।
अब तपाईं जान्दछन् कि तपाईं कैंडी व्रपरबाट के गर्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरूबाट मात्र सुन्दर तितलीहरू, छाताहरू, हैंडबैगहरू, क्रिसमसको पेडहरू, बर्फफ्लक्सहरू र ताराहरू, उज्ज्वल बलहरू र धेरै अन्य चीजहरू आउँछन्।
प्यान्स क्रसटका फूलहरू कसरी टाई गर्ने: योजनाहरू
कसरी एक सुन्दर कंगन, आत्म-रक्षा गर्ने?
कागजबाट कागजहरू कसरी आफ्नै हातले बनाउँदछ?
रगान बुनाई: पुरुषको ऊन स्वेटर
कसरी आफ्नो आफ्नै हात beading लागि मिसिन बनाउन
संचार को प्रकारका: फरक, तर सम्बन्धित,
शर्मा गरेको "पेंडोरा": मान। कंगन लागि आकर्षण (फोटो)
मा रूसी सैन्य शपथ
ग्रीक भोजन पाकशाला परम्परा। Cacık सस: नुस्खा